LANJAN’NY TENY MALAGASY : " Izay manaja ny teniny, manaja ny taniny "
Nanomboka ny taona 2000 dia nifampila hevitra ireo mpiaro sy mpandala ny teny Malagasy, ka natao mandritra ny iray volana ny fankalazana ny teny malagasy ary marihina isaky ny volana jona. 14 juin 2021
Raha ny hita ankehitriny anefa dia mihalefy ny lanjan’ny fahafehezana sy fahaizan’ny tanora sy zaza ny teny sy fiteny malagasy noho ny fikirakirana teknolojia maro isan-karazany.
Vitsy koa ireo mpampiasa ny teny malagasy ranoray tsy misy fangarony fa zary lasa vary amin’akotry ny fomba fiteny. Ny mampalahelo aza dia ampidirin’izy ireo ao anatin’ny abidia malagasy tsy fidiny ireo zanatsoratra vahiny sasany rehefa manao soratra maro sosona na someso izy ireo.
Mahamenatra no sady mankarary sofina ny maro ny fampiasana ny teny malagasy ary lazain’ny sasany fa Ntaolo sy zanak’antitra aza moa raha mba manaja sy mifehy ary mivoy izany any an-dakilasy na eny anivon’ny fiarahamonina eny.
Miainga any amin’ny fanabeazana avy any am-bohoka ny teny raha ny fanazavan’ny jeneraly Desiré Ramakavelo, mpandala ny teny malagasy. Raha tiana handala ny teny malagasy ny zaza dia mila beazina amin’ny teny reny na ny tenim-paritrany avy, hoy izy, ka tsy hananosarotra ny zaza rehefa lehibe izy ny hivoatra amin’ny ankapobem-piainany rehetra.
Mila tezaina amin’ny foto-pisainana sy kolontsaina maha-malagasy hatrany izy rehefa tanora ary indrindra ezahina foana ny mampita fahalalana aminy amin’ny alalan’ny tenim-pirenena Malagasy, izay antsoin’ny maro ho "teny malagasy ofisialy". Araka ny voalazan’ity mpandala ny teny malagasy ity dia tenim-pirenena ny teny malagasy fa tsy teny ofisialy. Izany hoe teny ifandraisan’ny maro eto amin’ny Firenena malagasy na ny vahoaka sy ny Fitondram-panjakana.